Dental abscess (သွားနှင့် သွားဖုံးပြည်တည်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Dental abscess (သွားနှင့် သွားဖုံးပြည်တည်ခြင်း)
Dental abscess (သွားနှင့် သွားဖုံးပြည်တည်ခြင်း) ကဘာလဲ။
. သွားဖုံးပြည်တည်ခြင်း – သွားဖုံးတွင်သာဖြစ်လေ့ရှိပြီး သွားနှင့် သွားပတ်လည်ရှိ အရွတ်တစ်ရှူးများတွင် မဖြစ်ပွားပါ
. သွားပတ်လည်တွင်ပြည်တည်ခြင်း – သွားအားထောက်ကန်ထားပေးသော သွားပတ်လည်ရှိ အရွတ်နှင့်တစ်ရှူးများတွင်ဖြစ်ပွားသည်
. သွားတွင်းပြည်တည်ခြင်း – သွားတွင်းရှိ အတွင်းသားများတွင် ဖြစ်ပွားသည်
ထိုကဲ့သို့ပြည်တည်ခြင်းများသည် ထိရောက်သော ကုသမှု လိုအပ်ပြီး မကုသပဲထားပါက
ပိုမိုဆိုးဝါးကာ သွားများပျက်စီး စေနိုင်သည်။
Dental abscess (သွားနှင့် သွားဖုံးပြည်တည်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အလွန်အမင်းအဖြစ်နည်းသည်။ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးများတွင် အဖြစ်များလေ့ရှိသည်။
အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အမူအကျင့်များကို ရှောင်ကြည်၍ ဖြစ်ပွားမှုအား လျှော့ချနိုင်သည်။ ကျန်ရှိသော အကြောင်းအရာများအား ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
Dental abscess (သွားနှင့် သွားဖုံးပြည်တည်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ပြည်တည်နေသော နေရာအားထိကြည့်ပါက နာနေခြင်း
အေးသော ပူသော အစားအသောက် နှင့် အရည်များအား စားပါက နာကျင်ကာ သည်းညည်းမခံနိုင်ခြင်း
အဓိကအားဖြင့် သွားနှင့်သွားဖုံးတို့သည် နာနေလေ့ရှိပြီး တခါတရံ ထိုးကိုက်သကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး ပြင်းစွာနာကျင်နေတတ်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောနာကျင်မှုသည် ရုတ်တရက်ဖြစ်လာလေ့ရှိပြီး တရက်နှင့်တရက် ပိုမိုဆိုးဝါးလာလေ့ရှိသည်။ တခါတရံတွင် နား၊မေးရိုးနှင့် လည်ပင်းဆီသို့လည်း နာကျင်မှုကား ပြန့်နှံ့သွားတတ်သည်။
Dental abscess (သွားနှင့် သွားဖုံးပြည်တည်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဘက်တီးရီးယားများသည် သွားပိုးစားနေသော အပေါက်ငယ်များလေးများကမှ တဆင့်ဝင်ရောက်ကာ အပြင်ပိုင်းသွားကြွေလွှာ၏ အတွင်းပိုင်း အတွင်းရှိ ပျော့သောနေရာများအား တိုက်ခိုက်လှိုက်စားလာကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သွား၏အတွင်းဂလိုင်ခေါင်းတခုလုံးအား ဝင်ရောက်ကာ ရောင်ရမ်းစေသည်။
ထိုမှတဆင့် ပိုဆိုးလာသောအခါ ဘက်တီးရီးယားများသည် သွားအားထောက်ကန်ပေးထားသော အရိုးသေးလေးများဆီသို့ဝင်ရောက်ကာ သွားအတွင်းပိုင်း တခုလုံးတွင် ပြည်တည်စေသည်။
ငါ့ဆီမှာ Dental abscess (သွားနှင့် သွားဖုံးပြည်တည်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ကျန်ရှိသော အကြောင်းအရာများအား ဆရာဝန်နှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပါ။
Dental abscess (သွားနှင့် သွားဖုံးပြည်တည်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ထိရောက်သောကုသမှုပေးနိုင်သောသူများမှာ သွားဆရာဝန်များပင်ဖြစ်သည်။ သာမာန် ကုသမှုများဖြင့် ကုသနိုင်သလို တခါတရံတွင် ခွဲစိပ်မှုများပါပြုလုပ်ရတတ်သည်။
ပြည်တည်နာအားလှီးထုတ်ခြင်းဖြင့် ပြည်များအား ထုံဆေးဖြင့် ဖောက်ထုတ်လေ့ရှိသည်။
သွားတွင်းပြည်တည်ခြင်းအားကုသခြင်း – အတွင်းပိုင်း သွား၏အမြစ်မှ ပြည်များအားဖောက်ထုတ်ပေးရသည်။ သွား၏အတွင်းပိုင်းရှိ မကောင်းသောတစ်ရှူးစများနှင့်
ပြည်များအား သွားကိုအပေါက်ဖောက်ကာဖယ်ထုတ်ရသည်။ နောက်ဆက်တွဲပိုးမဝင်အောင်
သွားပတ်လည်ပြည်တည်နာများအား ကုသခြင်း – ပြည်များအားဖောက်ထုတ်ကာ သွားပတ်လည်ချောင်နေရာများအား သန့်စင်ဆေးကြောပိုးသတ်ရသည်။ သွား၏အမြစ်နံရံများအား ညှိပေးကာ ချောမွတ်စေခြင်းဖြင့် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းကို ကာကွယ်ကာ အနာကျက်စေသည်။
သွားအတွင်းပိုင်းပြည်တည်နာများ ပြန်ဖြစ်ပါက မကောင်းသော တစ်ရှူးစများနှင့်သွား၊သွားဖုံးများအား သွားအထူးပြု ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များမှ ဖြတ်တောက်ကုသပေးရသည်။
သွားပတ်လည်ပြည်တည်နာများပြန်ဖြစ်ပါကလည်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်များမှ သွားဖုံးသားများအား ပြန်လည်ပုံဖော်ညှိပေးခြင်းအားဖြင့် ချောင်များအား ပိတ်အောင်ခွဲထုတ်ကုသပေးရသည်။
ပြန်လည်ဖြစ်ပွားပါက သွားအားလိုအပ်လျှင် နှုတ်ကာ ကုသရတတ်သည်။
အလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်သော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ က ကုသမှုခံယူရန်စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်
အနာသက်သာစေသည်။ ရေးသားထားသော ဆေး အညွှန်းများအား ဖတ်ကာ လိုက်နာသင့်ပြီး အနာသက်သာရုံနှင့် သွားဆရာဝန်အားပြသရန်မလိုဟု မထင်မှတ်ရပါ။
အက်စ်ပရင်၊အိုင်ဘူကရိုဖန်၊နှင့် ပါရာစီတမောတို့က အနာကျဆေးကောင်းများဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့ဆေးများက လူနာအချို့အတွက်မသင့်တော်ပေ။
ဥပမာ- ပန်းနာရင်ကျပ်ရှိပါက အိုင်ဘူပရိုဖန်အား မ သောက်သုံးရ။ အစာအိမ်အနာရှိပါကလည်းမသောက်သုံးရ။
အက်စပရင်ဆေးအားလည်း အသက်16နှစ်အောက်ငယ်ပါကလည်းကောင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်စေ နို့တိုက်နေဆဲ မိခင်တွင်လည်းကောင်း အသုံးမပြုရပါ။
မည်ကဲ့သို့သော အနေအထိုင်များက ကုသမှုပိုမိုကောင်းမွန်စေသနည်း။
အေးသော အစာများနှင့် အရည်များအား ရှောင်ကြည်ခြင်း
ပူသော အစာများနှင့် အရည်များအား ရှောင်ကြည်ခြင်း
ပြည်တည်နေသော နေရာအား မကလိခြင်း
Dental abscess. https://www.medicalnewstoday.com/articles/170136.php. Accessed November 2, 2017